Jenezy 12 - Ny Baiboly
1Hoy Iaveh tamin'i Abrama: Mialà amin'ny taninao sy amin'ny fianakavianao ary amin'ny tranon-drainao mba ho any amin'ny tany hasehoko anao. 2Izaho hahatonga anao ho firenena lehibe sy hitso-drano anao, ary hampanan-daza ny anaranao. 3Ho tonga fanasoavana hianao; ny manasoa anao hohasoaviko, ny manozona anao hozoniko, ary aminao no hanasoavana ny firenena rehetra ambonin'ny tany.
4Dia niainga Abrama araka ny tenin'ny Tompo taminy, ary niara-nandeha taminy koa Lota. Efa dimy amby fito-polo taona Abrama fony izy niala tany Haràna. 5Nentiny Saray vadiny, sy Lota zana-drahalahiny ary ny harena rehetra nananany, mbamin'ny mpanompo azony tany Haràna, dia niainga ho any amin'ny tany Kanaana izy ireo, ka tonga tany amin'ny tany Kanaana izy.
6Dia namaky ny tany Abrama, hatrany amin'ny fitoerana atao hoe Sikema, hatrany amin'ny terebintan'i More. 7Ny Kananeana tamin'izay no nitoetra tamin'ny tany. Niseho tamin'i Abrama Iaveh ka nanao hoe: Homeko ny taranakao ity tany ity. Ary teo Abrama nanorina otely ho an'ny Tompo izay niseho taminy. 8Nifindra avy eo izy ho any amin'ny tendrombohitra ao atsinanan'i Betela, dia niorin-day izy, ka Betela teo andrefany ary Hay teo atsinanany. Ary nanorina otely ho an'ny Tompo izy teo, ka niantso ny anaran'ny Tompo. 9Dia nandroso ihany Abrama nifindrafindra lasy nianatsimo.
10Fa nisy mosary teo amin'ny tany ka nidina nitoetra any Ejipta Abrama, fa lehibe ny mosary teo amin'ny tany. 11Nony efa nadiva hiditra tany Ejipta dia hoy izy tamin'i Saray vadiny: Fantatro fa noho hianao vehivavy tsara tarehy, 12rahefa mahita anao ny Ejipsiana dia hataony hoe: Vadiny io, ka hovonoiny aho, fa hianao kosa hovelominy. 13Koa lazao fa anabaviko hianao, ka hianao no handraisany ahy tsara ary hianao no hamelany ahy ho velona. 14Nony tonga tany Ejipta Abrama, dia hitan'ny Ejipsiana fa tsara tarehy tokoa ny vadiny. 15Nony nahita azy ny lehibe ao amin'i Faraona dia nataony laza masaka tamin'i Faraona izy: ary nalaina ho ao an-dapan'i Faraona ravehivavy. 16Nasiany soa Abrama noho ny amin-dravehivavy, ka nahazo ondry, omby, ampondra, mpanompo lahy sy mpanompo vavy, ampondravavy sy rameva. 17Nefa loza mafy dia mafy no namelezan'ny Tompo an'i Faraona sy ny ankohonany, noho ny amin'i Saray vadin'i Abrama, 18ka nampaka an'i Abrama Faraona nilazany hoe: Nahoana aho no dia nataonao toy izao? Ahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy, 19fa nataonao hoe: anabaviko izy; ka tonga nalaiko ho vady. Koa indro ankehitriny ny vadinao, raiso izy ka mandehana. 20Dia nohafatrafaran'i Faraona ny mpanompony, ny amin'i Abrama, ka nalefany hody izy sy ny vadiny, omban'ny fananany rehetra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0656 seconds